“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > “သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ်
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 4:19 AM နည်းပညာဗဟုသုတ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန်“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ်​။
ရေ​နွေးအိုး အများစု ဟာ power supply. ​ခေါ် လျှပ်​စစ်​ ကို ​အောက်​ဖက်​ အ၀ိုင်း​နေရာက ​ကြွေးပါတယ်​ ၊ အဲ့ဒီ​နေရာ မှာတပ်​ဆင်​ထားတဲ့ terminal ​ကြေးပြား​လေး​တွေဟာ အလွန်​ပါးပြီးအသုံးပြု တာ ကြာလာရင်​ အပူဒဏ်​​ကြောင့်​ ပျက်​စီး ကာ ငုတ်​ နှစ်​ခုမထိ​ ​တော့ဘဲ လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​မစီးနိုင်​ကာ ​ရေ​နွေး ကျိုမရဖြစ်​တဲ့ဘ၀ကို​ရောက်​ရပါတယ်​။
၁.ယိုးဒယား ကလာတဲ့ ဟင်း​ကြော်​အိုး အနီ​​တွေမှာ သုံးတဲ့ ​အခံ​ဆော့ကက်​ဂေါင်း (​ကြွေခံဖြစ်​ရပါမယ်​)ကို လျှပ်​စစ်​ဆိုင်​​တွေမှာ 500/- နဲ့ ၀ယ်​ပါ။ ပုံ(၁)
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 3
၂.​ရေ​နွေးအိုးေ​အာက်​ဖက်​ screw သုံးလုံးဖြုတ်​ပြီးဖွင့်​ပါ။ အလည်​ အ၀ိုင်းသို့ power supply ​ပေး သည့်​ ၀ါယာစ နှစ်​စ ​တွေ့ရပါမည်​ ။(အပြာနှင့်​ အနီ) ၊၎င်းအစ နှစ်​ခုအား ဘဲနှုတ်​သီး ပလာယာဖြင့်​ အသာဖြုတ်​ပါ။ ပုံ (၂)
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 4
၄. ​အောက်​​ခြေ အ​ပေါက်​​ဖောက်​ရာတွင်​ ​ဖောက်​စက်​ မရှိပါက ​ဖော်​ပြထားသလို သံချွန်​ /စ​ကေဘာ ကို မီးအပူ​ပေးပြီး ​​ရေ​နွေးဘူး​အောက်​ခံ ​ကော်​သားကို အ​ပေါက်​​ဖောက်​ ​ယူပါ။ ပုံ (၃)
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 5
၅. ​ဆော့ကက်​အထိုင်​ ​ကြွေ​ခေါင်း တပ်​ဆင်​​နေရာချရာတွင်​ လျှပ်​စစ်​ ၀င်​မည့်​ငုတ်​ နှစ်​ခု မထိ​အောင်​ စံနစ်​တကျ နတ်​ကြပ်​ ​ပေးပါ။(တဖက်​ဖက်​ကို ရာဘာ ပိုက်​​သေး စွပ်​​ပေးလျှင်​ ပိုပြီးစိတ်​ချရပါသည်​။ပုံ (၄)
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 6
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 7
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 8
(ယမန်​​နေ့က ကျ​နော်​ ပြုပြင်​​ပေးခဲ့​သော အမျိုးတ​ယောက်​ရဲ့ ​ရေ​နွေးအိုး ပါ)
ဗဟုသုတ နှင့်​ ​ငွေကို​ခြွေတာနိုင်​​စေရန်​ ​ရေးသားတင်​ပြသည်​။
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် 9
[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျ“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ။
ရနှေေးအိုး အမြားစု ဟာ power supply. ချေါ လြှပျစဈ ကို အောကျဖကျ အဝိုငျးနရောက ကွှေးပါတယျ ၊ အဲ့ဒီနရော မှာတပျဆငျထားတဲ့ terminal ကွေးပွားလေးတှဟော အလှနျပါးပွီးအသုံးပွု တာ ကွာလာရငျ အပူဒဏျကွောငျ့ ပကျြစီး ကာ ငုတျ နှဈခုမထိ တော့ဘဲ လြှပျစဈဓာတျမစီးနိုငျကာ ရနှေေး ကြိုမရဖွဈတဲ့ဘဝကိုရောကျရပါတယျ။
၁.ယိုးဒယား ကလာတဲ့ ဟငျးကွျောအိုး အနီတှမှော သုံးတဲ့ အခံဆော့ကကျဂေါငျး (ကွှခေံဖွဈရပါမယျ)ကို လြှပျစဈဆိုငျတှမှော 500/- နဲ့ ဝယျပါ။ ပုံ(၁)
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 3
၂.ရနှေေးအိုး အောကျဖကျ screw သုံးလုံးဖွုတျပွီးဖှငျ့ပါ။ အလညျ အဝိုငျးသို့ power supply ပေး သညျ့ ဝါယာစ နှဈစ တှရေ့ပါမညျ ။(အပွာနှငျ့ အနီ) ၊၎င်းငျးအစ နှဈခုအား ဘဲနှုတျသီး ပလာယာဖွငျ့ အသာဖွုတျပါ။ ပုံ (၂)
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 4
၄. အောကျခွေ အပေါကျဖောကျရာတှငျ ဖောကျစကျ မရှိပါက ဖျောပွထားသလို သံခြှနျ /စကဘော ကို မီးအပူပေးပွီး ရနှေေးဘူးအောကျခံ ကျောသားကို အပေါကျဖောကျ ယူပါ။ ပုံ (၃)
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 5
၅. ဆော့ကကျအထိုငျ ကွှခေေါငျး တပျဆငျနရောခရြာတှငျ လြှပျစဈ ဝငျမညျ့ငုတျ နှဈခု မထိအောငျ စံနဈတကြ နတျကွပျ ပေးပါ။(တဖကျဖကျကို ရာဘာ ပိုကျသေး စှပျပေးလြှငျ ပိုပွီးစိတျခရြပါသညျ။ပုံ (၄)
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 6
၆.၎င်းငျးနောကျ ပထမ ဖွုတျထားခဲ့သညျ့ ဝါယာ ၂ စကို အသဈထိုငျထားသညျ့ ကွှေ ဆော့ကကျတှငျ တပျဆငျပေးပွီး အောကျဘကျမှ screw သုံးလုံးကို စံနဈတကြ ပွနျတပျ ပေးလြှငျ ရနှေေးကွိုနိုငျသညျ့ အိုးအကောငျးတခု ရလာမညျဖွဈပါသညျ။ပုံ(၅)
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 7
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 8
(ယမနျနကေ့ ကနြျော ပွုပွငျပေးခဲ့သော အမြိုးတယောကျရဲ့ ရနှေေးအိုး ပါ)
ဗဟုသုတ နှငျ့ ငှကေိုခွှတောနိုငျစရေနျ ရေးသားတငျပွသညျ။
“သုံးမိနဈ” လြှပျစဈ ရနှေေး အိုး ပကျြရငျ ပဈမထားနဲ့အခုလိုပွငျသုံးရငျ အမြားကွီးသုံးလို့ရတယျ 9
“သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:19 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် “သုံးမိနစ်​” လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ်​။ လူသုံးများ​...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:19 AM